စစ်ရှောင်စခန်းများသို့သွားရောက်ကူညီရန်UNHCRယာဥ်တန်းအခက်တွေ့နေ - Myanmar Pressphoto Agency
ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်သို့ရောက်ရှိနေသည့် UNHCR(The UN Refugee Agency)၏အကူအညီပေးရေးယာဥ်တန်းသည် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများထံသို့သွားရောက်ရန် အခက်အခဲများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်သိတာကတော့ ဒီနေ့မြို့ဦးဘုန်းကြီးကျောင်းရယ် ၊ ရိုမန်ကတ်သလစ်ချာ့ချ် ကျောင်းရယ် ၊ မြို့မနှစ်ချင်းကျောင်းရယ် အဲ့၃နေရာကိုဖြန့်ခွဲပြီးပေးနေတာတော့သိတယ်။ နေရာတွေကတော့ မြို့ပေါ်ကနေရာတွေပါပဲ။ ခရီးစဥ်အသေးစိတ်ကိုတော့ ကျနော်မသိပါဘူး။ စစ်ရှောင်တွေနေတဲ့နေရာက အခုကာလဆိုသွားရလာရခက်ခဲတယ်လေ။ပြီးတော့အခြားအကြောင်းအရင်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအစည်းအဝေးမတက်ရတော့သေချာမသိပါဘူး”ဟု မင်းတပ်မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးက MPAသို့ပြောသည်။
UNHCR၏ယာဥ်တန်းသည် မင်းတပ့်မြို့သို့ ထောက်ပံ့ရန် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများကို ၆ဘီးကားတစ်စီး၊၁၂ဘီးကားတစ်စီးဖြင့်သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၅,၀၀၀အတွက်အကူအညီများပေးရန် ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရောက်ရှိလာသည့်အချိန်တွင် စစ်တပ်မှ UNHCR၏ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများကို ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတာဝန်ရှိသူများကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး မြို့ပြင်သို့မထွက်ရန် ကန့်သတ်မှုများပြုလုပ်ထားကြောင်း မင်းတပ်မြို့မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇူလိုင်လ၁၉ရက်တွင် MPAသို့ပြောဆိုခဲ့သည်။
UNHCRယာဥ်တန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ယူထားသူဇော်မင်းထွန်းကို ဆက်သွယ်၍မရရှိသဖြင့် မင်းတပ်မှစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုကိုထံသို့ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ”ကျနော်မသိဘူးဗျ။ကျနော်ကတာဝန်နဲ့တစ်နေရာကိုရောက်နေလို့ပါ၊ ကျနော်မသိပါဘူး”ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
UNHCRအနေဖြင့် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လုံး လှူဒါန်းမည်ဟု ကြေညာထားသော်လည်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသို့သွားရောက်ခွင့်မရသဖြင့် ပစ္စည်းများပြန်သယ်သွားမည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း MPAအနေဖြင့်သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးချေ။ မင်းတပ်မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးက အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးသေချာစွာသိရှိခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
မင်းတပ်တွင် စစ်တပ်နှင့်ဒေသခံPDFများ၏ ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများကြောင့် လူဦးရေထောင်နှင့်ချီစစ်ရှောင်နေရသည်။
လူဦးရေ၂၀၀ခန့်ရှိသည့်စစ်ရှောင်စခန်း၈ခုမှာ မင်းတပ်မြို့ပေါ်တွင်ရှိသော်လည်း ထောင်နှင့်ချီသောစစ်ဘေးရှောင်များမှာ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
အဆိုပါစစ်ဘေးရှောင်များအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးအကာအကွယ်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်များမြင့်တက်လျက်ရှိနေသည်။
#UNHCR #မင်းတပ်စစ်ရှောင် #MPA #IDP #မင်းတပ်
UNHCR Convoy Faces Difficulties to Deliver Aid to IDPs
The UNHCR (The UN Refugee Agency) aid convoy which have arrived in Mindat is facing difficulties to go to IDP camps.
“As far as we know, they gave aid to just three places which are Myo Oo monastery, Roman Catholic Church and Myoma Baptist Church. Those are inside the town. I don’t know the details of the trip. Places where IDPs stay are now difficult to access. There may be other reasons. I don’t know exactly because I didn’t attend the meeting,” saidatownship head to MPA.
UNHCR aid convoy arrived in Mindat withasix-wheeler anda12-wheeler with aid supplies for 5000 people.
When they arrived, the military did not allow entrance to foreigner staffers, only Myanmar native officials were allowed witharestriction to not go beyond the town,aMindat official told MPA on July 19.
When the military spokesperson Zaw Min Tun could not be reached regarding the UNHCR convoy, we contacted major Aung Ko Ko, military’s in charge person in Mindat. He said,”I don’t know about it. I am away on duty.”
Despite the UNHCR’s announcement to distribute the aid for the whole week and after they were not allowed to visit the IDP camps, there were rumors that they would return with the aid, but MPA could not confirm this yet.
Regarding that issue,aMindat township head also said he did not know about it exactly.
In Mindat, due to intense military clashes between the local defense forces and the military, thousands are fleeing the war.
Even though there are eight IDP camps in the town for 200 in each, thousands are hiding far away from the town. They are also in desperate need of food, medicines, protective equipment and basic needs.
#UNHCR #MindatIDPs #MPA #Mindat #IDP #MPA
Tags: ChinState, IDP, Mindat, MPA, Myanmar, News, Support, UNHCR